Kasikaziwa isizathu sokubulawa kwenkosi - Ilanga News
Home Izindaba Kasikaziwa isizathu sokubulawa kwenkosi
Umndeni uyifice ilele eduze kwesibhamu sayo
iNkosi Hlanganani Biyela (54) edutshulwe yabulawa isanda kufika emzini wayo.
LILOKHU liqhubekile nokugubuzela indlu yabaholi bomdabu KwaZulu-Natal, ifu elimnyama njengoba ngoMgqibelo kudutshulwe kwabulawa iNkosi yakwaBiyela, eDlangubo, eMpangeni, kungakapheli isikhathi esingakanani kubulawe ibambabukhosi lakwaZondi, eNkandla.
Ubuholi bendabuko buvuke izolo ngeSonto ngezindaba zokubulawa kweNkosi Hlanganani Biyela (54) ebingusihlalo wamakhosi ngaphansi kukaMasipala iKing Cetshwayo okuthiwa idutshulwe ngabantu abangaziwa, abebeyilalele unyendle ngasemzini wayo.
INkosi Biyela ilandele ibambabukhosi uMzomuhle Zondi obulawe ngeledlule. ILANGA lithole ukuthi inkosi ibulawa nje, ibisanda kufika emzini wayo, ingakangeni nasendlini.
Kuthiwa kuzwakale ukuqhuma kwesibhamu izikhawu eziningi, okuthe uma amanye amalungu
omndeni ephuma, ayifica ilele pha-nsi idubuleke emzimbeni.
Kuthiwa isibhamu sayo besiseceleni kwayo. ILANGA lithole ukuthi kunezinsolo zokuthi ababulali noma umbulali, bebeyicuthele ngaphakathi egcekeni inkosi njengoba ucingo okubiywe ngalo umuzi belunqanyuliwe, okusolwa ukuthi isigilamkhuba sifohle kulona.
UMnu Dumisani Mchunu ongundunankulu wenkosi, uthe bagqemeke engeqiwa ntwala ngokubulawa kwayo. Uthe akukho inkosi eke yakubika kubona futhi kabazi ukuthi ngubani ongaze ayifisele okubi ngale ndlela.
“Inkosi sayigcina ngoLwesibili. Sahlukana konke kukuhle futhi ingakaze ibike ukuthi kukhona okungahambi kahle. Ibingumuntu ozikhonzele amancoko, bekuthi noma umuntu engaphumelelanga ukuya emhlanganweni, azisole ngoba inkosi ibinamahlaya, kumnandi nje njalo uma sinayo,” kusho uMnu Mchunu.
INkosi Phathisizwe Chiliza engusihlalo wendlu yabaholi
bomdabu KwaZulu-Natal, ithe lesi senzo sokubulawa kwenkosi sibuhlungu ngendlela eyisimanga kanti uyethemba ukuthi amaphoyisa azokwenza konke okusemandleni ukubopha abenzi bobubi.
“Lesi yisimo esishaqisayo futhi esinzima nokusikholwa. Kuyathusa ukuthi kule minyaka ewu-27 izwe lathola inkululeko, kusenabantu abangenza into enjena, bayohlasela inkosi emzini wayo bayibulale.
“Inkosi ibingumuntu onomoya ophansi, ngisho ngabe kukhona ebifuna ukukudlulisa, ibikudlulisa ngomoya ophansi. Siyacela ukuthi uma kukhona ongaba nolwazi ngokuhlaselwa kwenkosi axhumane namaphoyisa ukuze kuzoboshwa abenzi bobubi.
“Sidlulisa amazwi enduduzo
emndenini nasesizweni senkosi kanti (abantu) siyabanxusa ukuba behlise imimoya, bayekele amaphoyisa enze umsebenzi wawo,” kusho yena.
UNgqonqgoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka, usigxekile lesi sigameko, wanxusa izinhlaka zomthetho ukuba zibophe abenzi bobubi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuvulwe icala lokubulala, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleKuboshwe nommeli kweletulo lokusocongwa kobeyimeya
Next articleAboKhozi bayalwe ukuhlonipha abalaleli